यी हुन् मांसाहारीबाट शाकाहारी बनेका बलिउड कलाकार ! किन बने त शाकाहारी ? हेर्नुहोस् !
माघ २८, २०७५ Bigul Media | STT
एजेन्सी- मासु जन्य वस्तुको उपभोग गर्नेहरुलाई मांसाहारी भनिन्छ भने मासु जन्य वस्तुको उपभोग नगर्नेहरुलाई शाकाहारी भनिन्छ। शाकाहारी-मांसाहारी पूर्ण रुपले दुई फरक जीवनशैली रहेका छन्।
मांसाहारीबाट शाकाहारी बन्न धेरै गार्हो मानिन्छ। मासु तपाइलाई कत्तिको मनपर्छ ? तपाईकति दिन मासु नखाई बस्न सक्नु हुन्छ ? मांसाहारीहरुलाई यो प्रस्न सोध्यो भने पक्कै पनि उनीहरुको नाक खुम्चिने छ । गार्है भए पनि मांसाहारीबाट शाकाहारीमा परिणत भएको देख्न पाइन्छ। यस्तै मांसाहारीबाट शाकाहारी बनेका केहि बलिउड कलाकारहरु निम्न उल्लेखित छन्।
नेहा धेरै समय देखि शाकाहारी बन्ने सोचिरहेकी थिइन्। विवाह गर्ने बितिकै नेहाले मासु छाडेर शाकाहारी बनेकी थिइन्।
आलिया भट्ट कुनै समयमा मासु जन्य खानाको पारखी थिइन्। उनलाई मासुजन्य खानाहरु धेरैनै मन पर्थ्यो। तर आलिया अहिले शाकाहारी भोजनको मात्र उपभोग गर्छिन्। आलियाका पिता महेश भट्ट पनि शाकाहारी हुन्।
फिटनेसको कारण चर्चा र लाइमलाइटमा हुने जोनले पनि मासु छाडेको धेरै भैसक्यो। शाकाहारी भोजन मात्रै मन पराउँछन्। जनवारलाई मारेर खानु निर्दयता मान्ने जोन शाकाहार भएर पनि फिट हुन सकिन्छ भन्छन्।
लगभग ३-४ वर्ष देखि मासु खान छाडेकी अनुष्का पूर्णरुपले शाकाहारी भैसकिन्। उनले मासु छाड्नुको किस्सा भने केहि रोचक छ। उनको कुकुरलाई मासु मननपर्ने र शाकाहारी रहेको हुँदा उनी पनि शाकाहारी बनेको बताइन्छ।
मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानले श्रीमती किरनको आग्रहमा मासु खान छाडेका थिए। उनी अहिले पूर्णरुपमा शाकाहारी बनिसकेका छन्। शाकाहारी हुन आमिर भिडियो मार्फत प्रेरित गर्ने गर्छन्। विश्व शाकाहारी दिवसको दिन उनेल एक भिडियो समेत सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए।
अमिताभ बच्चन अहिले सम्म पनि फिट र जवान देखिन्छन्। उनले धेरै पहिला देखि शाकाहारी जीवनलाई अवलम्बन गरेका थिए। उनी अहिले सम्म मासु नखाएको दाबी पनि गर्छन्। यति मात्र नभई उनले अहिले सम्म चुरोट र रक्सिलाई पनि हात लगाएका छैनन्।
सोनाक्षीले पनि धेरै समय देखि मासु खाएकी छैनन्। उनी शाकाहारी बनेको धेरै समय भैसकेको बताउँछिन्। जनवार काटेर खाने मानिसहरुको समूहको हिस्स्सा बन्न मन नपराउने हुँदा उनी शाकाहारी बनेकी थिइन्।
विवादमा रहिरहने कंगना पनि शाकाहारी रहेकी छिन्। स्वास्थ्यको लागि आफूले मासु छाडेको उनी बताउँछिन्। कंगनाले केहि वर्ष अगाडी एस्
सबै भन्दा सुन्दर शाकाहारी महिलाको उपाधि समेत जितेकी थिइन्।
कुनै समयमा सोनम समुन्द्री खानाको पारखीनै थिइन्। उनलाई सी-फूड धेरैनै मनपर्थ्यो। तर उनी अहिले शाकाहारी भैसकेकी छिन्। डाक्टरहरुले मासु नखान एस् सल्लाह दिएपछि शाकाहारी बनेकी थिइन्।
अभिनय मात्र नभई नृत्यको कारण चर्चामा रहने सबै भन्दा फिट बलिउड नायकहरुमा पर्छन्। मांसाहारी भोजनसँग शाहिदको राम्रै लगाब थियो। तर ब्रायन हिन्सको किताब ‘लाइफ इज फेयर’ पढेपछि उनी शाकाहारी भएका थिए।
प्रकाशित : सोमबार, माघ २८, २०७५१०:१६
सपनाको संसार भन्दा आलीशन छ सैफ अलि खानको दरबार ! पहिलो पटक बाहिरिए तस्विर ! [तस्विर सहित]